HomeChampions LeagueBeckenbauer oo si amakaag ah u fasiray guuldaradii Bayern ka soo gaadhay Madrid
Madaxweyne sharafeedka kooxda Bayern Munich, Franz Beckenbauer ayaa ku tilmaamay cambaareeyey qaab ciyaareedka naadiga uu horjoogaha u yahay Pep Guardiola, mid uu ka maqan yahay kubadaha tuuryada dheeri, kulankii is araga hore ee Champions League oo ay xallay 1-0 kaga adkaatay Real Madrid garoonka Santiago Bernabue.
Karim Benzema ayaa shabaqa dhigay goolka kaliya ee ay Madrid ku awooda sheegatay xallay , kaas oo guul muhiim ah u ahaa Real oo u safraysa Allianz Arena todobaadka dambe.
In kastoo kooxda Martida ahaydi kubadu inta badan lugtooda ku jirtay, hadana may dhicin in goolwade Iker Casillas dareemo xanuun marka laga reebo kubadii ugu dambeysay ee uu ka badbaadiyey ciyaaryahanka bedelka ku soo gallay ee Mario Gotze.
Beckenbauer ayaa la dhacay isla markaana amaanay qaab difaaceedkii Madrid, wax laga niyad jabana ku tilmaamay in kooxda difaacanaysa horyaalka Champions League aanay samayn kubado weerar wax ku ool ah.
Wuxuu ku yidhi warfidiyaha Sky: “Waligay maan arag difaaca Madrid oo sidan u fiican.
“Laakiin waxay ila tahay in Bayern lafteedu ugu wacnayd inuu sidaas noqdo difaaca Madrid. Waxa ka maqnaa hanaanka xoojinta, Kubado laag xoog ah dibada kagamay ganayn.”
Beckenbauer wuxuu intaas ku daray: “Waxa laga yaabaa in Bayern la yaabtay qaabka ay Real ula ciyaaraysay. waxay ahayd mid kamid ah ciyaartii ugu fiicnayd ee aan waligay ka arko Madrid. Waxay u maamulayaan hab-dhaca siday doonayeen. Si deg deg ah bay u weerar gallayeen, isla markiiba dib bay u soo wada dagayeenk.
“Madrid ayaa gacanta sare lahayd, wanaagsanayd, degdeg badnayd. Waxay u qalmeen guusha. Laakiin wali kulan kale ayaa hadhay. Waa laba is arag, laakiin wuxuu noqon doonaa mid khatar badan isla markaana aad u adag.”
War-bixin: Halkuu maraya hawsha lagu dhigayo Dooga Mac-malka ah garoonka kubadda cagta ee Hargeysa Stadium + Sawirro
Messi Oo Sagootiyay Abidal, Dhambaal Mahad Celin Ahna U Soo Diray
25/12/2014 Khadar Dirir